wararka maanta-arlaadii.net » Mareekanka Oo ka hadlay Duqeynti Ka dhacday Beertii ku taalay Afgooye Ee Shabeelada Hoose
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka hadashay hawlgal ciidankooda ay qayb ka ahaayeen oo ka dhacay Gobolka Shabellaha hoose, kaasi oo dad rayid ah ay ku waxyeeloobeen.
Warsaxaafadeed kasoo baxay milatariga Mareykanka ayaa lagu sheegay inay eegayaan warar ku saabsan in dad shacab ah lagu dilay weerar ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya.
Qoraalkan kasoo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM, ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka qeyb galeen hawlgal ay ciidamada Soomaaliya hoggaaminayeen oo lagu kala dhantaalay shabakad Al-Shabaab ah, kaasi oo ka dhacay deegaanka Bulcida ee Soomaaliya, 9-kii May.
“Waxaan ka warhaynaa tuhun ku saabsan in khasaare dad rayid ah uu ka dhashay weerarkaas, waxaana warbixinnadan u qaadaneynaa si dhab ah. Waynu eegi doonaa akhbaaraadka ku saabsan dhacdadan, haddii aan helno in eedeymahan ay yihiin kuwa sax ah, waxaa taliska AFRICOM uu qaadi doonaa tallaabooyinka xiga ee ku habboon” ayaa lagu yiri qoraalka.